Saacadaha ugu fiican ee la bixiyo xilliga Kirismaska ​​| War gadget
Saacadaha ugu fiican ee la bixiyo xilliga kirismaska
Qolka Ignatius | | qalabka, Smartwatch
Kirismasku waa ku dhow yahay. Haddii aynaan ka faa'iideysan dalabyada kala duwan ee Jimcihii Madoobaa ee la soo dhaafay oo aanan sii wadin annaga oo aan caddayn waxa aan ka iibsan karno lammaanahayga, hooyo, aabbe, carruurteenna ama asxaabteena, Actualidad Gadet waxaan ku abuureynaa wax ka duwan liisaska waxyaabaha ku habboon in la bixiyo xilliga Kirismaska.
Si baaskiil nalalka smart, tirinta jijimooyin, ku hadla smart o auriculares si aad u siiso waxaad la tashan kartaa hagayaasha aan horay u daabacnay. Hadda waa markiisa smartwatches, mid ka mid ah aaladaha sida aadka ah u hela suuqyada sanadihii la soo dhaafay oo ay weheliyaan tiro jijimooyin.
1 Smartwatch ama jijin jijin?
2 Samsung Galaxy Watch Firfircoon
3 Samsung Galaxy Watch Firfircoon 2
7 Taxanaha Apple Watch 3/4/5
Smartwatch ama jijin jijin?
Kahor intaanan go'aansan smartwatch waa inaan cadeyn maxay ku kala duwan yihiin smartwatch iyo jijin tira koob ah. Qiyaas ahaan, farqiga ugu weyn, marka lagu daro qiimaha, waxaa laga helaa shaqeynta ay na siiyaan.
Halka smartwatches na siinayaan cabir shaashad ballaaran iyo suurtagalnimada ka jawaab labada wicitaan iyo fariimo, Tirinta jijimooyinka ayaa diiradda saaraya cabbiraadda dhaqdhaqaaqayaga jidh ahaaneed, shaqo aan sidoo kale ka heli karno smartwatches.
Farqiga kale ee udhaxeeya smartwatches iyo jijinka jijimooyin ayaa laga helay nolosha batteriga. In kasta oo smartwatches ay leeyihiin nolol batari ugu badnaan hal ama laba maalmood, tirinta curcadaha gacmaha waxay socon karaan illaa laba toddobaad.
Samsung Galaxy Watch Firfircoon
El Samsung Galaxy Watch Active Waa jiilkii ugu horreeyay ee noocyo cusub oo smartwatches ah oo loo sameeyay in lagu gaaro tiro dad ah. Jiilkan koowaad wuxuu na siiyaa a Shaashad 1,1-inji ah oo leh 360 × 360 qaraar iyo batari 230 Mah ah. Waxay leedahay IP68 kahortaga biyaha iyo boodhka iyo caabbinta ilaa 5 ATM.
Marka laga hadlayo shaqeynta, haddii aan ku lammaaneyno taleefanka gacanta ee Samsung, waxaan awoodi doonnaa inaan sida ugu badan uga faa iideysano, laakiin maahan shardi aasaasi ah oo aan ku raaxeysan karno dhammaan faa'iidooyinka ay na siiso markay tahay cabiro dhaqdhaqaaqayaga jimicsiga, cabir garaaca wadnaheena iyo kormeerida wareegyadayada hurdada.
Qiimaha Samsung Galaxy Watch Active waxaa laga keenay 199 euros.
Samsung Galaxy Watch Firfircoon 2
Jiilka labaad ee Samsung's Watch Active kala duwan ayaa si ficil ah noo siiya muuqaalada la mid ah jiilkii ugu horreeyay laakiin waxay ku dareysaa laba shaqo oo cusub oo xiiso leh sida qalabka dhicista iyo qalabka koronto-dhaliyaha.
Mahadsanid dayrtaha, Accelerometer-ka aaladda ayaa si otomaatig ah u ogaanaya haddii aan si lama filaan ah ugu soo dhacnay oo nagu casuumay in aan ogeysiino xaaladaha degdegga ah. Haddii aanaan ka jawaabin codsigaas, waxay si otomaatig ah u sameyn doontaa wicitaanka oo aan kula xiriirayno goobta aan ku sugan nahay.
Shaqada electrocardiogram waxay noo ogolaaneysaa inaan ogaanno cilladaha qalbigeenna ku jira ee aan horay loo ogaan. Apple Watch, oo ah kii ugu horreeyay ee smartwatch ee lagu soo daro astaantan, ayaa badbaadiyey tiro aad u badan oo naf ah iyada oo ay ugu wacan tahay shaqadan.
Samsung Watch Active 2 wuxuu leeyahay shaashad dhan 1,4-inch (44 mm) / 1,2-inch (40 mm), waxaa maamula Tizen (Samsung system-keeda ka shaqeeya) iyo processor-ka Exynos 910. Waxay na siineysaa 4 GB oo keyd ah, bluetooth 5.0 iyo sidoo kale waxaa lagu heli karaa nooca LTE.
Qiimaha Samsung Galaxy Watch Firfircoon 2 44mm waa 295 euro. Haddii aynaan rabin inaan lacag badan ku bixino, waxaan heli karnaa jiilkii ugu horreeyay, Samsung Galaxy Watch Firfircoon oo qiimihiisu yahay 195 euro.
Marka lagu daro qaabka firfircoon, Samsung sidoo kale waxay na siisaa Samsung Galaxy Watch, Nooc heer sare ah. Moodelkani waa dhaxalka dabiiciga ah ee aaladda Gear ee suuqa ku dhacday dhawr sano ka hor aadna ugu guulaystay suuqa. Waxaa lagu heli karaa laba cabbir: 42 iyo 46 mm iyo Waxaa lagu sameeyaa waxyaabo qaali ah.
Sida dhammaan moodooyinka ay Samsung hadda ku bixiso suuqa smartwatch, waxaa maamula Tizen. Qaabka 46mm wuxuu leeyahay shaashad 1,3-inch ah halka nooca 42mm uu leeyahay shaashadda 1,2-inch. Labada shaashadood Waxay leeyihiin qaraar ah 360 × 360.
Batariga nooca 46mm waa 472mAh, 270mAh oo loogu talagalay nooca 42mm. Qaabkani waa mid ka mid ah kuwa yar ee leh NFC chip si ay u awoodaan inay wax ku bixiyaan iyada oo loo marayo curcurkayaga. Waxay leedahay qalab GPS ah si loola socdo dhaqdhaqaaqa jireed ee banaanka.
Qiimaha Samsung Galaxy Watch waxaa laga keenay 269 euros, oo loogu talagalay nooca 46 mm.
Haddii aad raadineyso smartwatch ballaaran, ka Huawei Watch GT2 noqo kan aad raadineyso. Huawei's Watch GT 2 waa moodelkii ugu dambeeyay ee ay soo bandhigtay shirkadda Aasiya waana jiilka labaad ee Watch GT, jiilkii koowaad oo iibiyay in kabadan 10 milyan oo unug.
Qaabkani wuxuu leeyahay a Shaashadda AMOLED 1,39-inji, waxaa maamula LiteOS (nidaamka howlgalka ee u gaarka ah Huawei) iyo processor-ka Kirin A1 (sidoo kale waxaa hindisay oo soo saaray Huawei). Waxay leedahay keyd loogu talagalay 500 heesood iyo is-maamul-goboleed gaari kara 2 toddobaad (yareynta dhammaan shaqooyinkeeda ugu badnaan).
Waa la jaan qaada casriga ah oo kasta oo macruufka (u baahan macruufka 9 ama ka dib) iyo Android (waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka dib) iyada oo loo marayo Barnaamijka Caafimaadka ee Huawei. Waxaa lagu heli karaa laba nooc oo kala ah 42 iyo 46 milimitir, sidaa darteed waxay la jaanqaadaysaa cabir kasta oo curcurka ah.
Marka laga hadlayo shaqeynta, taas oo ah waxa runtii annaga muhiim noo ah, ma ahan oo keliya inaan sameyno diiwaangeli heerka garaaca wadnahayaga oo aan kormeerno hurdadeenna, laakiin sidoo kale qiyaasaysa nooc kasta oo jimicsi ah oo aan si toos ah u qabanno, dibedda iyo qolka jimicsiga.
El Wax alaab ah lama helin. waxaa laga heli karaa Amazon for 239 euros.
Soosaaraha saacadda ee Fossil waa mid ka mid ah kuwa ugu faca weyn qaybta smartwatch-ka waxaana caddeyn fiican u ah tan Fosil Sport Smartwatch. Moodelkan, oo ka duwan moodooyinka caadiga ah ee shirkaddan, wuxuu na siiyaa naqshad isboorti, waxaa lagu heli karaa laba cabbir 41 iyo 43 mm iyo saddex midab: buluug, madow iyo casaan (kaliya waxaa lagu heli karaa nooca 41 mm).
Gudaha Fosil Sport-ka waxaan ka helnaa Android Wear, Waxaa maamula Snapdragon Wear 3100, waxay leedahay jab NFC ah si loo bixiyo iyadoo la adeegsanayo curcurka Google Pay oo leh dareemayaal ilaaliya hurdadayada iyo dhaqdhaqaaqa isboortiga iyo garaaca wadnaha.
Xarkaha qaabkani waa 22 mm, sidaa darteed waxaan gacanta ku haynaa tiro badan oo xulashooyin ah oo aan ku qaabeyn karno. Qiimaha Fossil Sport waxaa laga keenay 149 euro at Amazon.
Taxanaha Apple Watch 3/4/5
Haddii aad haysatid iPhone, smartwatch-ka ugu fiican ee aad haysatid oo kuu oggolaanaya inaad ka faa'iideysato labada iOS waa Apple Watch. Iyada oo Apple Watch kaliya kama jawaabi kartid farriimaha, laakiin sidoo kale sidoo kale waad wici kartaa.
Taxanaha Apple Watch 3 waa nooca ugu raqiisan ee aan gacanta ku hayno. Farqiga u dhexeeya Taxanaha 4 iyo 5 waxaa laga helayaa cabirka shaashadda, taas oo ka socota 38 illaa 40 iyo laga bilaabo 42 illaa 44 mm. Xargaha ku jira ayaa ku habboon labada nooc.
Dhammaan moodooyinka Apple Watch ayaa lagu heli karaa nooca LTE. Farqiga ugu weyn ee aan ka dhex helno Taxanaha 4 iyo silsiladda 5 waa dambe ee had iyo jeer-on bandhigay. Labadaba waxaa ka mid ah qalabka baaritaanka dhicitaanka iyo shaqada korantada si loo ogaado cilladaha wadnaha.
El Apple Watch Taxanaha 5 waxaa laga heli karaa nooca 44 mm ee loogu talagalay 479 euro at Amazon. ka Apple Watch Taxanaha 3 ayaa loo heli karaa 229 euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Saacadaha ugu fiican ee la bixiyo xilliga kirismaska
At Apple iyagu uma aha kaftan wata nuqulada iPod Classic-kaaga
Kumbuyuutarkeygu waa gaabis yahay Sideen u hagaajiyaa